Mikaroka ny fampiasana ny fitaovan’ny teknolojia ao India hanakanana ny mpanohitra mandritra ny fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
"Rindrambaiko io. Tsy mahita ny fironana ara-pinoana" — Minisitry ny Atitany
Voadika ny 03 Mey 2022 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, বাংলা, Français, English
Sary avy amin'i Randeep Maddoke, CC BY-SA 4.0, tao amin'ny Wikimedia Commons.
Mitombo ny fampiasana teknolojia any India hanaraha-maso ny mpanohitra, indrindra fa ny mpanao fihetsiketsehana, ka miteraka voka-dratsy amin'ny fahalalahana maneho hevitra. Nanomboka tamin'ny taona 2018, nisy hetsi-panoherana nisongadina telo fara fahakeliny, samy nanana ny isany izay nitovy avokoa ny vokany: ny fampiasana an-jambany ny fitaovan’ny teknolojia hanaraha-maso sy hanakanana ny mpanao fihetsiketsehana.
Mametraka ny teknolojia amin'ny resaka politika
Tamin'ny 5 aogositra 2019, nofoanan'ny Governemantan’i India ny andininy faha-370 izay nanome sata manokana ho an'ny fanjakan'i Jammu sy Kashmir teo aloha, ka nahatonga azy ho faritany tantanan’ny foibe. Nahafahan'ny mponina ao amin'ny faritra hanana fizakan-tena amin'ny raharaha politika ny andininy faha-370 raha oharina amin'ny ambiny ao amin'ny firenena. Nanamafy ny governemanta raha nanazava ny fanapaha-kevitra tamin’ny famerana ny lalàna ao amin’ny parlemanta fa hanampy amin'ny fandresena ny kolikoly, ny fampihorohoroana ary ny fihemorana izay miroborobo ao ity fanapahan-kevitra ity. Taorian'io fanapahan-kevitra io, notapahin’ny governemanta tanteraka ny fifandraisana tao Jammu sy Kashmir. Nilaza ny tatitra fa notanana am-ponja ireo mpitarika politika ao an-toerana, noferana ny fampahalalam-baovao isam-paritra ary noraràna ny fivoriam-bahoaka. Noho ny fampahalalam-baovao voafetra, hita fa nisy fihetsiketsehana vitsivitsy nitranga rehefa nesorina tsikelikely ny fameperana, na dia teo aza ny fandavan’ny fampitam-baovao ofisialy momba izany.
Hamaky bebe kokoa: Inside Kashmir’s crisis
Volana vitsivitsy taty aoriana tamin'ny 11 Desambra 2019, lany tao amin'ny parlemanta ny volavolam-panitsiana ny zom-pirenena (CAA) ka niteraka andiana hetsi-panoherana nanerana ny fanjakana samihafa ao amin'ny firenena. Nilaza ireo mpanao fihetsiketsehana fa manavakavaka ny Miozolomana ny lalàna, nefa nanda izany governemanta. Raha nilamina ny ankamaroan'ireo hetsi-panoherana ireo dia nipoaka ny herisetra tao amin'ireo toerana fanaovana fihetsiketsehana tao New Delhi renivohitra, tamin'ny 23 Febroary, nitarika korontana teo amin’ny vondrom-piarahamonina. Raha kely indrindra, olona miisa 53 no namoy ny ainy ary 200 no naratra tamin'ity herisetra ity, raha voaroba ny trano sy fivarotana maro.
Tamin'ny 5 Jona 2020, nanomboka nandany lalàna telo momba ny fambolena ny governemanta izay nambarany fa hampiroborobo ny fitomboan'ny fambolena amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny sehatra tsy miankina sy ny fampihenana ny fitsabahan'ny fanjakana. Na izany aza, natahotra ny tantsaha sao hametraka azy ireo amin'ny toerana tsy azo antoka izany. Niteraka disadisa naharitra herintaona teo amin’ny tantsaha sy ny fitondram-panjakana ny tsy fifanarahana. Raha mbola nilaza ny governemanta fa tsy manana antontan-kevitra momba ny isan'ny tantsaha maty nandritra ny fihetsiketsehana izy ireo, ny sendikàn'ny tantsaha kosa nanamafy fa tsy latsaky ny 537 ny tantsaha namoy ny ainy. Tamin'ny volana Novambra 2021, nanambara ny praiminisitra Modi fa hanafoana ireo lalàna telo ireo ny governemanta.
Fironana fanaraha-maso mampiasa teknolojia
Amin'ireo tranga telo ireo, nampiasa drôna hanaraha-maso ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana. Nitatitra momba ny mpanao fihetsiketsehana iray izay niresaka momba ny fomba “nanafenan’ny olona ny tarehiny” tamin'ny voalohany rehefa mahita drôna ny lahatsora-baovao iray avy any Kashmir. Na izany aza, nanazava izy fa nitsahatra io fanao io satria efa zatra loatra ny drôna mivezivezy teo ambonin’izy ireo ny mpanao fihetsiketsehana. Nanamafy ny mpitandro filaminana fa manampy ireto mpampihatra lalàna ireto hanara-maso ny fihetsik'ireo mpanao fihetsiketsehana sy handraisana fepetra fisorohana ireo drôna ireo.
Nandritra ny hetsika fanoherana ny CAA sy ny fihetsiketsehan'ny tantsaha, nampiasa drôna ny mpitandro ny filaminana hakana sary ireo mpanao fihetsiketsehana. Ankoatra izany, nampiasa teknolojia famantaran-tarehy ny manampahefana amin'ireo tranga roa ireo. Nitatitra ny Indian Express, gazety mpivoaka isan'andro ao amin'ny firenena, fa nampiasa famantaran-tarehy mandehahoazy ny polisin'i Delhi hijerena ny vahoaka amin'ny fihetsiketsehana ara-politika tamin'ny volana Desambra 2019. Sary nalain'ny manampahefana tao amin'ny “toerana fanaovana fihetsiketsehana lehibe natao nanerana ny tanàna” no nampiasain’ilay rafitra. Noho ny tsy fisian’ny vaovao azo ampahibemaso momba ily rafitra dia vinavinaina fotsiny ny valim-panontaniana raha toa ka avy amin'ny fihetsiketsehana CAA ny angondrakitra.
Raha manahy ny fanararaotan’ny fanjakana mampiasa ny angondrakitra ireo izay nanatrika teny ankianjan’ny hetsi-panoherana dia nilaza ny tompon'andraikitra fa tsy mikasa ny hitahiry angondrakitra izy ireo. Tamin'ny tatitra nataon’ny fampitam-baovao no nanazavan’ny lehiben’ny polisy iray fa “ireo olona lasibatra ihany no kendreny.” Nampiany fa “Tsy manana angondrakitra momba ny mpanao fihetsiketsehana izy ireo, ary tsy mikasa ny hitahiry izany.”
Fanampiny, milaza ny manampahefana fa nanampy hamantarana ireo mpandika lalàna sy nanaovana fisamborana ity teknolojia famantaran-tarehy ity. Tao amin'ny parlemanta, nilaza ny minisitry ny atitany Amit Shah raha namaly ny adihevitra momba ny rotaka tao Delhi, fa nanampy hamantarana ireo olona miisa 1.900 izay nandrisika herisetra ilay teknolojia famantaran-tarehy. Hoy izy, raha niaro ny fampiasana izany, hoe “Rindrambaiko io. Tsy mahita ny fironana ara-pinoana. Tsy mahita ny fomba fitafy. Ny endrika ihany no hitany ary amin’ny alalan’ny endrika no hanatrana ilay olona”. Na dia manjavozavo aza ny fizotrany, nilaza ny tati-baovao fa nampitahaina tamin'ny angondrakitry ny karapam-pifidianana sy ny fahazoan-dàlana hamily fiara ny sary nalaina tamin'ny alalan'ny CCTV sy ny “lahatsary azo alaina malalaka”. Ankoatra ny famantaran-tarehy, nampiasain’ny manampahefana “ny famerenana angona voafafa avy amin'ny fitaovana elektrônika nampisain'ny olona tao anatin'ny rotaka”, ny famangitana ara-jeografika, ny sarintany avy amin’ny drôna, ny fitaovana Haranitan-tsaina voatr'olombelona (IA), ary ny famantarana dian-tanana ADN. Milaza izy ireo fa nanampy tamin’ny fanaovana “fanadihadiana malalaka sy ara-drariny ireo fitaovana ireo”.
Hamaky bebe kokoa: Who is paying the cost of India's declining democracy
Ankoatra ny fanaraha-maso ireo mpanao fihetsiketsehana eny an-kianja, nokasain’ny governemanta hosakanana ny kabary tamin'ny alàlan’ny fanakorontanana ny tolo-pifandraisana sy tamin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny tambajotra sosialy, tamin'ireo tranga telo ireo. Nisedra ambaratongam-panakanam-pifandraisana isankarazany ny fikambanam-paritra Jammu sy Kashmir nanomboka ny 4 aogositra 2019. Anisan'izany ny fandraràna ny tambajotra sosialy izay nanakana ireo tao Kashmir tsy haneho ny ahiahiny. Tamin'ny volana Febroary 2021 vao naverina tamin'ny laoniny ny tolotra anterineto haingam-pandeha, saingy midika izany fa tsy afaka niditra tamin'ny aterineto hanaraka vaovao momba ny COVID-19 ny fikambanan’ny faritra. Raha ny momba ny hetsika manohitra ny CAA, firenena miisa fito farafahakeliny manerana ny firenena no nisedra fanakatonana aterineto tamin'ny fotoana voafaritra. Ankoatra izay, nisy ny fanakanana isankarazany momba ny fifandraisana nandritra ny fikorontanan’ny tantsaha izay napetraka ho fepetra fisorohana tany Delhi sy Haryana taorian'ny nivadihan’ny fihetsiketsehana iray ho herisetra.
Hetsika fifaharana: Mametraka ny politika amin'ny teknolojia
Nifanehitra tamin'ny hetsi-panoherana ireo hetsi-pamoretana ireo. Nizara toro-hevitra tao amin'ny tambajotra sosialy ireo mpanao fihetsiketsehana momba ny fiarovan-tena amin'ny fanafenana endrika ho setrin'ny fampiasana famantaran-tarehy tao an-drenivohitra nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny CAA. Amin'ny tranga iray hafa, namoaka lahatsoratra momba ny fitantanana angondrakitra ny mpikaroka mahaleotena iray milaza ny loza ateraky ny famantaran-tarehy sy ny fomba hampihenana izany. Tao anatin’ny fihetsika tsy manampaharoa, nanameloka ny famerana ny aterineto sy ny fifandraisana ny sendikan'ny tantsaha. Notakian’ izy ireo ny famerenanana amin’ny laoniny ny tolotra, raha tsy izany dia hisy fihetsiketsehana bebe kokoa.
Mampiasa fomba samihafa ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ny firenena hanoherana ny fampiasana an-jambany ny teknolojia. Anisan’izany ny fanairana ny sain’ny besinimaro, ny fitadiavana ny mangarahara amin’ny alalan’ny fangatahana zo hahazo vaovao, ary ny fitazonana ny manampahefana ho tompon’andraikitra. Ohatra, nandefa fampahafantarana ny lalàna tany amin'ny polisin'i Delhi noho ny fampiasana ny teknolojia famantaran-tarehy mandehahoazy tsy ara-dalàna ny Internet Freedom Foundation, fikambanana miaro ny zo nomerika. Amin'ny tranga iray hafa, nangataka ny fitsarana imbetsaka mba hanohitra ny baiko fanakatonana ny aterineto ny Software Freedom Law Centre, fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena iray hafa miasa amin'ny fahalalahana nomerika sy sivily.
Na dia taratry ny fanantenana aza ny hetsika fifaharana toy izany amin'ny ambaratonga isam-batan'olona sy amin'ny alàlan’ny fandaminana, dia manohy miady ho amin'ny fiarovana ny fitanan-tsiambaratelo sy ny zo nomerikan'ny mpanao fihetsiketsehana i India.
Tsidiho azafady ny pejin'ny tetikasa ho an'ny lahatsoratra bebe kokoa avy amin'ny Unfreedom Monitor.
Fahalalahàna miteny 6 ora izay